Mihazakazaka mividy rakitra petatsary ‘Euro 2020′ an’ireo mpilalao baolina kitra ao an-toerana ny Makedoniana · Global Voices teny Malagasy
Sambany nifandrombahana ny stiker mpilalao baolina kitra Makedoniana
Voadika ny 17 Avrily 2021 4:51 GMT
Pejy miaraka amin'ny ekipam-pirenen'i Makedonia Avaratra ao amin'ny rakitra petatsary Euro 2020. Sary: Emilija Buraliev, nahazoana alàlana.
Navoakan'ny Meta.mk voalohany ity tantara ity. Navoaka eto indray ny endrika nasiam-panovana noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty misy eo amin'ny Global Voices sy ny Metamorphosis Foundation. Th
Sambany taorian'ny fahavakisan'i Yogoslavia, manana fahafahana mahita ny ekipam-pireneny baolina kitra ao anaty boky petatsary ho an'ny tompondaka eoropeana ireo mpanangona petatsary baolina kitra any Avaratr'i Makedonia.
Raha jerena ny fanehoan-kevitra tao amin'ny tambajotra sosialy sy ny valalabemandry teny amin'ny magazay sy ny fitavarotan-gazety, dia niteraka fahatsapana mahafinaritra ny rakitra petatsary farany “Euro 2020” nataon'ilay mpanonta Italiana Panini, miorina amin'ny firavoravoana tamin'ny fandresena farany vitan'ny ekipa nasionaly Makedoniana.
Natokana ho an'ny fiadiana ny Tompondakan'ny baolina kitra Eoropeana izay tokony natao tamin'ny taona 2020 ny rakitra petatsary, saingy nahemotry ny UEFA tamin'ny 11 Jona tamin'ity taona ity noho ny areti-mandringana COVID-19, tsy nisy ny fanovana ny anarany.
Natomboka tamin'ny volana aprily ny fizarana ny boky petatsary sy ny petatsary tany Makedonia Avaratra. Nandritra ny ora fiasana tamin'ny Asabotsy, nilahatra nanoloana ny magazay “World Press” ao afovoan'ny renivohitra Skopje ny olona tamin'ny sokajin-taona rehetra, niandry tamim-paharetana hividy ny boky petatsary sy ny petatsary.
Nilahatra teo anoloan'ny fivarotana ireo mpankafy niandry tamim-paharetana ny fahafahan'izy ireo mividy ilay boky petatsary. Skopje, 3 Mey 2021. Sary: Meta.mk
Mponina iray ao Skopje, Emilija Buraliev, nilaza tamin'i Meta.mk fa lasa fombam-pianakaviana ny fanangonana petatsary manomboka amin'ny fotoana ilalaovan'ny zanany lahy baolina eo amin'ny faha-6 taona. Nanomboka teo dia nanangona petatsary amin'ny fifaninanana UEFA Euro sy ny rakitsary tompondaka Erantany FIFA ry zareo. .
Isaky ny taona faharoa, dia nividy rakitsary izahay ary nahavita nameno azy rehetra. Ny ampahany tena nampientanentana dia ny fandraisana anjara tamin'ny fivorian'ny besinimaro ahitana ireo mpanangona izay nifanakalo petatsary tao amin'ny zaridainan'ny tanàna sy tao afovoan'i Skopje, akaikin'ny tsangambaton'i Mera (Reny) Teresa. Nitana ny andraikitra mpamily aho raha nanao ny fifanakalozana kosa ny zanako lahy. 14 taona izy izao ary tsy nilalao baolina intsony, saingy mbola manangona petatsary ihany izahay amin'ity taona ity noho ny hafaliana manokana amin'ny fandraisan'ny Makedoniana anjara. Amin'ity taona ity dia tsy antenaiko ny hisian'ny fivorian'ireo mpanangona petatsary marobe noho ny coronavirus, saingy hanao izay vita amin'ny fomba hafa amin'ny aterineto isika.
Tao amin'ny tambajotra sosialy, nizara ny fiheverany ireo olona nahavita nividy petatsary, indrindra ireo izay nahavita nahita petatsary misy ny sarin'ireo mpilalao baolina kitra mpiray tanindrazana, singanina manokana ny kapitenin'ny ekipa Goran Pandev.
Mpirahalahy Pandev sy [ilay saka] Dzhimoti Melanija Loli
Ny fomban-drazana amin'ny fanangonana sy fifanakalozana ireo karatra afaka apetaka dia ao anatin'ny kolontsaina iraisana any Yogoslavia teo aloha. Tamin'ny taona 70 sy 80, nanerana ny federasiona Yogoslavia teo aloha, nisy ny fahalianana be tamin'ny boky petatsary an-tanindrazana, toy ny “Životinjsko carstvo” (Fanjakan'ny Biby) avy amin'ny orinasan'ny peta-kofehy Kroaty Kraš, ankoatra ireo boky petatsary nafarana avy amin'ny Panini. Nisy ireo rakitra petatsary isan-karazany marobe nahaliana, nanomboka tamin'ny fanatanjahan-tena ka hatramin'ny tantara an-tsary, ny andian-tsarimihetsika amin'ny fahitalavitra ka hatramin'ny votoaty ara-panabeazana.
Tamin'ny taona 2006, nanangana ny tranokala slikicki.com ilay programera Makedoniana Goran Shlakeski, (“slikički” no teny makedoniana midika hoe petatsary). Nandritra ny taona maro, dia hita tamin'ny teny Makedonianina, anglisy ary Slovenina izy io, ary nanjary toeram-pivorian'ny vondrom-piarahamonina an-tserasera ahitana ireo mpanangona petatsary. Ao amin'ity tranonkala tsy mitady tombom-barotra ity dia mamoaka ny angon-dry zareo ny mpanangona ary mandamina fifanakalozana.
Noho ny fisian'ny tambajotra sosialy, dia lasa goavana ny sasany amin'ireo fivoriana ireo, ahitana mpanangona an-jatony mivory ao amin'ny Loharano-paompy, toeram-pihaonana malaza ao amin'ny Zaridainan'ny Tanànan'i Skopje, izay notaterin'ny Global Voices tamin'ny taona 2014.
Ankoatra ny tambajotra fivarotan-gazety sy ireo magazay hafa, azo vidiana amin'ny alàlan'ny tranokala slikicki.mk, tantanan'i Dipres dooel – Skopje ihany koa ny sticker «Euro 2020». Ny vidin'ny sticker iray dia 8 denara (15 cents US), saingy amidy amina fonosana dimy, amin'ny vidiny 40 denara (0,77 dolara) izy ireo. Mba hamenoana ny rakitra petatsary, mila mahita petatsary 654 tokana ny mpanangona.
Manodidina ny 110 dolara ny sandam-bola amin'ny rakitsary petatsary iray manontolo, izay lafo tokoa raha vidim-boky iray any Makedonia Avaratra. Matetika mandany vola be kokoa ireo mpanangona, satria matetika izy ireo tsy afaka manakalo ireo petatsary fanolo. Na izany aza, nambaran'izy ireo fa noho ny fitiavana manosika azy ireo no hanao izany, indrindra tamin'ity indray mitoraka ity, rehefa manana ny ekipam-pireneny tafiditra rakitsary, izay mahatonga azy ireo mahatsiaro tafiditra amin'ny tantaran'ny fanatanjahantena sy ny tantaran'ny firenena koa izy ireo.